Nguva yekuverenga: 3 maminitsi(Last Updated On: 24/03/2020)
Brisbane ndiye Queensland kuti guta uye inopiwa A-pasi zvinokwezva kufanana Sea World, ari patsangadzi akanaka uye nemapindu South Bank, uye Story Bridge uye zvakawanda - Australia raMwari chakarebesa cantilever zambuko.
Zvinonyaradzawo guta rokusika, ne unyanzvi mamiziyamu uye namaberere uye chic cafes aplenty, ndinoiitawo ndicho springboard hwakakwana Gold Coast mahombekombe, gungwa, uye egungwa.
pa 21 makiromita refu, richafa kushumira 18 pazviteshi rose guta uye vagari uye vashanyi zvakafanana vachakwanisa kusvetukira uye kure sezvo ivo kufadza.
Ipswich riri kumaodzanyemba-kumadokero Brisbane yemo nzvimbo uye ndipo uchawana anoshamisa Workshops Rail Museum.
Brisbane nhandare yendege chinhu ndakabatikana chokufambisa nomusimboti iri huvandudzike ne cafes vakaita Fonzie Abbot, nembariro kufanana dzaifanoiswa Tavern uye kupaka rinobatsirwa kufanana Looking4.com.
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei chikwereti ane Link kuti ichi Blog romukova, kana iwe tinya pano: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/tips-brisbane-train/ - (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)